आफु बिदेश हुँदा श्रीमती गर्भवती भएपछी श्रीमानले दिए कडा जवाफ…! हेर्नुहोस भिडियो – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /समाचार/आफु बिदेश हुँदा श्रीमती गर्भवती भएपछी श्रीमानले दिए कडा जवाफ…! हेर्नुहोस भिडियो
आफु बिदेश हुँदा श्रीमती गर्भवती भएपछी श्रीमानले दिए कडा जवाफ…! हेर्नुहोस भिडियो
भिडियो तलको समाचारको अन्त्यमा राखिएको छ, पुरा हेर्नुहोला । ४ असाेज । आफूलाई को रोना पोजेटिभ देखिएको भन्दै घरबाट निस्किएका एक जना प्रेमीकासँगै प क्राउ परेका छन् । को रोना पोजेटिभ देखिएको भन्दै श्रीमतीलाई ढा टेर घरबाट निस्किेका उनी प्रेमिकासहित प क्राउ परेका हुन्। घ टना भारत ईन्दौंरको हो ।
भारतीय सन्चार माध्यमकाअनुसार को भिड सेन्टरमा भर्ना हुन भनि निस्केका श्रीमान सम्पर्कवि हिन भएपछि श्रीमतीले प्र हरीलाई खबर गरेकी थिइन् । ईन्दौंरको ताजोलमा बस्ने २८ वर्षीय ती पूरुषले फोन गरेर आफूलाई को रोना भएको बताएका थिए । लामो समय श्रीमान सम्पर्कमा नआएपछि श्रीमतीले प्रहरीलाई खबर गरेकी थिइन् । उनलाई खोज्न प्र हरीले पहिलो चरणमा जिल्लाका सबै आइसोलेसन सेन्टरमा खोजी शूरु गरेको थियो ।
तर लामो समय खोजेपछि उनी अन्तै भेटिए । पुरानो मोबाइल नम्बर बन्द गरेको भए पनि नयाँ नम्बर लिएको खुलेपछि प्रहरीले ट्रेसिङ गरेको थियो । लोकेसनका आधारमा उनलाई प्रहरीले प क्रन सफल भयो । जब उनी फ क्राउ परे तब उनको पोल खुल्यो । उनी नाम बदलेर प्रेमिकासँग एउटा घरमा बस्दै आएका रहेछन् ।
कानुनी छिद्रले म-यो गैँडा
भिनाजुको घरमा आएकी १९ वर्षीया किशोरीलाई भिनाजुले जबरजस्ती करणी गर्दा
चन्द्रागिरिमा चुच्चो हतियार प्रयोग गरी एकको हxत्या, दुई पक्राउ
गुल्मीमा भयो यस्तो अकल्पनिय घटना, एउटै आमाका दुई सन्तानबीच भयो यस्तो घxटxना
अनिताको उपचार गर्दै आएका बिनोदलाई भिख मागेर उपचार गर्ने भन्ने आरोप